टिका सानुले इन्द्रेणी छोड्नुको कारण बल्ल खुलाईन । फेरी इन्द्रेणी फर्केलिन् ? बुहारी ४ खिच्दा सबै रोए (भिडियो हेर्नुहोस) - Public 24Khabar
Home News टिका सानुले इन्द्रेणी छोड्नुको कारण बल्ल खुलाईन । फेरी इन्द्रेणी फर्केलिन् ?...
टिका सानुले इन्द्रेणी छोड्नुको कारण बल्ल खुलाईन । फेरी इन्द्रेणी फर्केलिन् ? बुहारी ४ खिच्दा सबै रोए (भिडियो हेर्नुहोस)
अमेरिकी मेमरी च्याम्पियन नेल्सन डेलिससंगको अन्तर्वार्ता पछी पुन: आ.लो.चित बनिरहेका आफुलाई मेमरी किङ्ग बताउने विजय शाहीको अर्को क.र्तुत बाहिरिएको छ ।
ति विद्यार्थीहरुसंग २० दिन मै मेमरी सिकाउने भन्दै पैसा उठाएको वि.ष्टले बताए । पिडितहरु अहिले एक आपसमा रकम तिरेको रसिद संकलन गरेर आफ्नो ठ.गिएको पैसा फिर्ता लिन मिडियाको सहारा लिन थालेका छन । विजय शाहीलाई सम्पर्क गर्दा मिडियामा नजानु भन्ने गरेको वि.ष्टले बताए ।
तर पछिल्लो समय आएर शाहीले फोन नै नउठाएपछि उनीहरु मिडियाको सम्पर्कमा आएका हुन् । विजय शाहीले आफ्ना मान्छेहरु सुर्खेतमा खटाएर रकम उठाएर ठ.गिमा लागेको पिडितहरुको आ.रोप छ । पिडितहरुका अनुसार पुस्कल शर्मा र ओमले त्यहाँबाट रकम उठाएका थिए । विजय शाहीको कुरामा विस्वास गरेर कोहि पनि न.फ.स्न सुर्खेतका पिडितहरुले सल्लाह पनि दिएका छन । पिडितहरुसंग गरिएको कुराकानी यहाबाट हेर्नुहोस ।
Previous articleदुखद खबर: अस्पतालको लापरवाही’ले स्याङ्जाकी सबिनाको मृ’त्यु, डाक्टर भन्छन- कल्पना भन्दा बाहिरको मृ’त्यु भयो
Next articleसुजिताले सचिनलाई विवाहको प्रस्ताव गर्दा विवाद भएको थियो। सुजिताले विवाह नगर्ने भए म म’र्छु भनेकि थिईन्